Noraisin’ny ekipan’ny PSG tamin’ny fomba niavaka sy tsy nampoizina ary nanetriketrika ireo Frantsay 3 mirahalahy tompondaka eran-tany milalao ao aminy,
Alphonse Areola, Presnel Kimpembe ary Kylian Mbappé, tamin’ny fiverenan’ny ekipa namonjy fanazarantena tany Camp des Loges. Fresques, places de parking... tamin’ity herinandro ity.
Nambaran’ny ekipan’ny Athletic Bilbao omaly alarobia 08 aogositra fa eken’izy ireo ny hamotsotra an’ilay mpiandry harato Espaniola 23 taona milalao ao aminy, amin’ny sandany 80 tapitrisa euros “320 lavitrisa ar”. Izy izany ankehitriny no mpiandry harato lafo vidy indrindra teo amin’ny tantaran’ny baolina kitra eran-tany. Na dia tsy nambaran’ny Athletic Bilbao aza ny ekipa nividy an’ity mpiandry harato ity dia fantatra tamin’ny serasera nandeha fa ny ekipan’i Chelsea izany.
Fantatra fa hiatrika fanazarantena mandritra ny fotoana tsy voafetra hiaraka amin’ny ekipa mpilalao baolina kitra Aostraliana Central Coast Mariners ilay kintan’ny hazakazaka 100 m eran-tany, Usain Bolt. Mbola baraingo kosa aloha ny hoe : tena hiakatra kianja hilalao tokoa ve izy amin’izany ? Ny hilalao ao amin’ny klioba nandrian’ny fony dia i Manchester United anefa no tena mba niriany.